» पेन्टिकोस्टलवादका समस्या » ३५ ओटा सैद्धान्तिक सवालहरू » परिचय / सकारात्मक पक्षहरू
"सबै कुरालाई जाँच, जुन कुरा असल छ त्यसलाई बलियो गरी समातिराख।" (१ थेस्सलोनिकी ५:२१)
प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने व्यक्तिले सबै कुराहरूको जाँच गर्नुपर्दछ। उसले आधुनिक क्यारिज्म्याटिक अभियान (Modern Charismatic Movement) को पनि जाँच गर्नुपर्दछ। हाम्रो एक मात्र अचूक र निर्णायक मापदण्ड परमेश्वरको वचन हो। परमेश्वरको त्रुटिरहित वचनको तराजुमा जोख्दा क्यारिज्म्याटिक अभियानको वास्तविक तौल पत्ता लाग्छ। हाम्रो जाँच गर्ने विधि शिक्षाको आधारमा हुनेछ। यहाँ ३५ ओटा शिक्षागत प्रसङ्गहरूमा चर्चा गरिनेछ। हाम्रो चाबी प्रश्‍न यो हुनेछ, "पवित्र शास्त्रले के भन्दछ?" (रोमी ४:३)। क्यारिज्म्याटिक अभियानको शिक्षा परमेश्वरको वचनभन्दा भिन्न छ कि छैन भनेर थाह पाउन तुलनात्मक अध्ययन गरिनेछ। कुनै पनि शिक्षा परमेश्वरको वचनसित मेल खाँदैन भने अथवा त्यसले परमेश्वरको स्पष्ट शिक्षालाई खण्डन गर्दछ भने त्यस शिक्षालाई गलत र झूटा भनेर नामाकरण गरिनुपर्दछ।
हाम्रा निष्कर्षहरू वस्तुगत सत्यता (objective truth) मा आधारित हुनुपर्दछ अर्थात् परमेश्वरको वचनका स्पष्ट तथ्यहरूमा। हाम्रा निष्कर्षहरू आत्मगत भावनाहरू (subjective feelings) मा आधारित हुनेछैनन् र हुनुहुँदैन पनि – "मलाई एउटा यस्तो अनुभव भयो त्यसैले यो साँचो हुनुपर्दछ" भन्ने तर्क आत्मगत हो, वस्तुगत होइन। "अन्य भाषाहरूको दान वर्तमान समयमा पनि दिइँदछ किनकि मैले अन्य भाषामा बोलेको छु", "अन्य भाषामा बोल्नु ठीक रहेछ किनभने मैले चिन्ने फलानोले समेत अन्य भाषामा बोल्नुहुन्छ" — यी आत्मगत तर्कहरू हुन्। "आज पनि प्रेरितहरूको समयमा जस्तै चङ्गाइ गर्ने विशेष वरदान दिइँदो रहेछ किनकि मेरा एक घनिष्ट मित्रले एउटा त्यस्तो व्यक्तिद्वारा चङ्गाइ पाए", आदि आत्मगत तर्क हुन्। यस अध्ययनमा हाम्रा निष्कर्षहरू आत्मगत अनुभवहरूमा आधारित नभई परमेश्वरको वस्तुगत सत्यतामा आधारित हुनेछन् — "म यो जान्दछु किनकि परमेश्वरले सो भन्नुभएको छ। मेरा व्यक्तिगत अनुभवहरू जस्तासुकै होऊन्, म सब कुरालाई परमेश्वरको वचनले जाँच गर्नेछु। अनि यदि मेरो अनुभव वा मेरा भावनाहरूलाई परमेश्वरको वचनले खण्डन गर्दछ भने म आफ्ना लगायत अरूहरूका अनुभव वा भावनाहरूसित नभएर परमेश्वरको वचनसितै सहमत हुनेछु।"
"भावनाहरू आउँछन्, भावनाहरू जान्छन्, अनि भावनाहरू भ्रमात्मक हुन्छन्। मेरो अधिकार पत्र परमेश्वरको वचन हो, अन्य कुनै कुरा विश्वास गरिन लायक छैन। कुनै न्यानो अनुभूतिको अभावमा मेरो हृदय दोषी भावनाले कायल होला अरे तरैपनि त्यहाँ एकजना हुनुहुन्छ जो मेरो हृदयभन्दा महान् हुनुहुन्छ जसको वचन भङ्ग हुन सक्दैन। प्राण र शरीर अलग नहोउञ्जेल म परमेश्वरकै अपरिवर्तनीय वचनमाथि भरोसा राख्‍नेछु। किनभने ती टलेर गए तापनि उहाँको वचन सदासर्वदा खडा रहनेछ।"
हामीले क्यारिज्म्याटिक व्यक्तिहरूबाट सिक्न सक्छौं। यस अभियानलाई परमेश्वरको वचनले जाँच्ने क्रममा यस अभियानमा भएका तारिफ गर्न लायक र उदाहरणीय कुराहरूलाई स्वीकार्नुपर्छ। यस अभियानका सकारात्मक पक्षहरूबाट हामीले सिक्न सक्छौं। शिक्षागत पक्षमा सठीक हुन परमेश्वरले हामीलाई मदत गर्नुभएको होस्। तर शिक्षागत पक्षमा ठीक (orthodox) भएर पनि शिक्षालाई जीवनमा रूपान्तर गराउने मुक्तिदातासँगको वास्तविक र सठीक सम्बन्धमा कमी (dead orthodoxy) भने नहोस्। हामी आफूमा जीवनरहित शिक्षा भएको चाहँदैनौं साथै शिक्षारहित जीवन भएको पनि चाहन्नौं। साँचो शिक्षा सधैं "भक्तिअनुसारको" हुन्छ, अर्थात् त्यसमा परमेश्वरको भय अनुरूपको चालचलन हुँदछ (१ तिमोथी ६:३)।
« पेन्टिकोस्टलवादका ३५ ओटा सैद्धान्तिक सवालहरू
१) के तपाईंले पवित्र आत्मा पाउनुभयो? »